Ungabasusa njani abafowunelwa abaninzi kunye kwi-macOS | Ndisuka mac
Ungabasusa njani abafowunelwa abaninzi kunye kwi-macOS
Ukuba sihlala sithanda ukwazi zonke iinombolo zefowuni zabantu abasifowunelayo, kunokwenzeka ukuba ethubeni I-ajenda yethu igcwele iinombolo zefowuni negama layo elihambelanayo. Ngamanye amaxesha incwadi yethu yeefowuni inokuhamba kancinci kwaye icime ngokungacacanga inombolo yomnxeba, inyanzelise ukuba siyigcine kwakhona kwincwadi yethu yefowuni ukuba sifumana umnxeba kumntu esimaziyo.
Kusenokwenzeka ukuba abo bantu banxibelelana babelahlekile kwi-ajenda yethu, ngomlingo kwakhona. Konke oku endinxibelelana nayo ayisiyonyani yesayensi njengoko abanye banokucinga, kuba yenzekile kum kumatyeli amaninzi, endinyanzele ukuba ndicime i-ajenda yonke kwaye ndiqale kwangoko ukusombulula le ngxaki.
Kodwa akufuneki ukuba ube krakra kangako, ngaphandle kokuba unyuke waya empumlweni njengokuba ndandinjalo. Xa siqala ukuphonononga i-ajenda kwaye sibona ukuba umnxibelelwano uyaphindwa okanye sifuna ukucoca, indlela ekhawulezayo kwaye uhlala uyenza kwi-Mac yethu, hayi kwisixhobo sethu, ngaphezulu kwayo nantoni na kuba yeyona ndlela ikhawulezayo yokwenza kuba yintoni enye ivumela ukuba sicime abafowunelwa kunye, ngaphandle kokuya nganye nganye.
Cima abafowunelwa kunye kwi-macOS
Kuqala kufuneka siye kwisicelo sabafowunelwa.
Okulandelayo sicofa kumfowunelwa wokuqala esifuna ukumcima.
Ukuqhubeka nokukhetha abafowunelwa esifuna ukubacima, kufuneka sicinezele iqhosha le-CMD kwaye sihambe nganye nganye sibakhetha.
Ukuzicima kufuneka siye kwimenyu ephezulu kwaye ucofe kuHlela ukuze ukhethe kamva Cima abafowunelwa.
Ibhokisi yencoko yababini iya kuvela apho siya kucelwa isiqinisekiso sokwenza lo msebenzi. Kufuneka nje ucofe ku-Cima ukuze i-ajenda yethu ikhululeke kubo bonke abo banxibelelana babephindaphindiwe okanye abasenamdla kuthi.
Gcina ukhumbula ukuba ukuba unonxibelelwano oluhambelana kwi-iCloud, ezo zisusiweyo kwi-Mac yethu ziya kucinywa kuzo zonke izixhobo inxulunyaniswa neakhawunti efanayo kunye nongqamaniso lonxibelelwano olwenziwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Ungabasusa njani abafowunelwa abaninzi kunye kwi-macOS
Umbhalo kwiNtetho Pro, uza kwiVenkile yeApple yeMac
Sivavanye ii-headphone ezingenazingcingo zeSudio Regent